Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Beesha Mahamed Case oo u astaysay Maalinta Doorashooyinka S/land Maalintii xoraynta degmada Lughaya
Beesha Mahamed Case oo u astaysay Maalinta Doorashooyinka S/land Maalintii xoraynta degmada Lughaya
Nov 24, 2012 ENTERTAINMENT 3
Tan iyo intii ay bilaameen qorida iyo diiwaangalinta musharixiinta golaha deegaanka Jamhuuriyada S/land ayaa Beesha ciise waxay farogalin aan baaxad lahayn ku haysay degmada Lughaya.
Faragalintii ugu horaysay wax dhacday markii ay madaxwayne ku xigeenka S/land ka dhamaysteen inuu uga diiwaangaliyo xisbiga Kulmiye xubno gaaraya ilaa shan xubnood. Madaxwayne ku xigeenkku arintaasi wuu ka ogalaaday isaga oo xisbiga ka siiyey 5 xubnood halka markii hore ay ku lahaayeen hal xubin oo kaliya golaha deegaanka Lughayaad. Taasi waxay sabab u noqotay qodob ay ku doodaan oo ay xisbiyada kalena ay ka dhameeystaan intaasi in leeg.
Faragalinta labaad, ururka xaqsoor oo reer soomaliland u bixiyeen xumaan soor ayey waxay ka dhaadhiciyeen in 13ka xubnood ee degmada Lughayaba ay iyaga siiyaan iyaguna badalkeeda qaataan lacag looga soo guntay xagaa Jabuuti.dadka reer Lughayad markii arintaasi ka kaceen gudiga golaha doorashooyinku waxay amar ku bixiyeen in sidaa lagu aqbalo laguna diiwaan galiyo dadka uu Xumaan soor soo gudbistay. Reer Lughayaad iyaga oo sharciga iyo amarka golaha komishanka fulinaya ayey iska aamuseen.
Ka dib markii ay ololaha doorashooyinku ka bilaameen S/land ayuu ciise waxa uu ogaaday in aanay jirin dhul hagaagsan oo ay ka degaan degmada Lughaya oo ay ka soo saari karaan musharixiinta faraha badan ee xaaraanta lagu diiwaan galiyey ee degmada ka sharaxan. Taasina waxay keentay inay shir Ciise la isugu yimiday magaalada Geerisa ee xarunta ciidanka xeebaha Galbeedka S/land. Shirkaasi waxaa lagu go’aamiyey in shirkan shir ka blaadhan la isugu yimaado oo ciise galbeed ilaa jabuuti uu u dhanyahay laguna qabto magaalada Ceelgaal ee dhacda badhaha Aashacado iyo Geerisa.
Shirkii ka dhacay Ceel Gaal waxaa lagu xulay gudi odayaal ah oo ka kooban 60 xubnood oo ergo ahaan loogu diray wadanka jabuuti. Gudigaasi waxay la kulmeen madawaynaha jamhuuriyada jabuuti oo lagaga dhigay xubinta 61 aad.
Ciise waxuu go’aan ku gaaray inuu dad ka soo daad gureeyo magaalooyinka jabuuti oo dhan iyo dhulka fidsan jiida u dhaxay jabuuti ilaa diridhaba. Fulinta howshaasina waxaa garwadeen looga dhigay ku xigeenka labaad ee xisbiga xumaan iyo xaaraan soor ee xaqsoor isku magacaabay.
Ciise waxuu bilaabay inuu dadka soo daad gureeyo oo la keeno magaalada Lughaya ee xarunta degmada Lughayaad. Toban cisho ka hor magaalada Lughayaad waxaa degenaa hal nin oo ciise ah oo inan la yaal ah maantana waxaa jooga tiro ilaa 200 oo qof gaaray dadkaasi oo lagu keenay baabuur waawayn iyo yaryar isugu jira badankoodana laga keenay xagaa iyo jabuuti, iyada oo ay intaasi hordhac tahay baaxadeediina ay wali soo socoto.
Reer Lughayaad arintaasi aad iyo aad ayey uga yaabisay waxayna u gudbiyeen cabasho ninka haysta ciidanka xeebta ee amniga ka masuulka ah oo ay beesha ciise ugu magacdareen nabi Ciise loo soo diray.
Ninkaasi waa ninka badalay janankii qaaliga ahaa ee general maxamed Xuruun oo maanta hadii uu joogi lahaa marnaba nin Ciise ku hamiyeen falalka uu maanta ka gaysanayo deegaanka degmada Lughaya.
Gartii markii la is hor fariistay Ciisow meesha ilama daganid ee duulka aad I dul keentay maxaad uga jeeda sanaduuqda meesha la keenayaa dumarkaygaba kuma filee.
Ciise isaga oo og taageerada uu ka haysto Jabuuti iyo reerka ay reer binu ahmed isku sheegtaan ee Silaanyo ugu qoorta dheeryahay ayey ku andacoodeen goob kasta oo degmada Lughaya ka tirsan waxaan ka rabaa 250 cod markaa waad inoo kala qaybinaysaan codadka goobaha codbixinta la keeno.
War ninku ma dadku garaad dheeryahay ma labo nafood ayaa ku jira, ma geesi filimada hindiga India ku soo matali jiray oo xabada isku dhigi jiraybaa.
Ninkii ciidanka xeebta haystay ee garta qaade waxuu hadal ku soo jaray gaar isugu baxa oo soo heshiiya waanuu iska carraabay ilaa magaaladii nabi ciise looga bixiyey.
Ciisena gafuurka intuu kor u taagay ayuu howshiisii halkii ka sii watay. Xaal markuu halkaa marayo arin waxay la soo gudboonaatay dadkii deegaanka degenaa oo ta ku dhacday aanay wali cid S/land degen ku dhicin.
Waxaa hadal lagu soo gunaanaday hadii reer gabilay nidar ku mareen in ay birta ka rogaan, hadii golaha komishanka ka shaqaynaya lagu so daro cid magaca Samaroon sheegata ayna diideen Ardaydii Jaamacada Camuud ka socotay ee goobaha gabilay ka shaqayn lahaa, inaga oo si cad la inoogu soo duulay oo waliba xoolaha qaybiya la ina yiri maxaa inoo haray?.
Dadka deegaanku waxay isla garteen gari Ilaaha bay taqaane maalinta reer Soomaland doorashooyinka golaha deegaanka u dareerayaan ay codkooda dhiibanayaa inaguna dhulkeena aan xorayno oo dhiig aan u daadino kuna daadino.
Sidaasi darteed waxaa la ogaysiinayaa dhamaan umada dadkoodu degenyihiin degmada Lughaya inay u diyaargaroobaan dagaal uu dhiig ku daato oo dhulka lagaga xoraynayo gardaranayaasha soo duulay ee Jabuuti iyo s/land dabada ka wadaan.
Waxaa kaloo la ogaysiinayaa dhamaan beelwaynta Samaroon in dhulka aan laga dhacayn cida meesha degan oo kaliya ee dhulku uu yahay dhul samaroon leeyahay waxa raba in la wareejiyaa ay yihiin dawlado ka quwadwayn umada dhulka ilaaahay dhigay sidaasi daraadeen biyaha iyo saanada ha ku ciilina tolkiin.
Waxaa kaloo la ogaysiinaynaa saaxaafada gobol Awdal ka howl gashaa inay gabeen dadka degan deegaamada degmada Lughaya oo aanay marnaba saxaafada ka sheegin waxa duulaan iyo faragalin ka dhacaysa degmada iyo deegaankeedaba sidaasi darteed waxaa saxaafada reer Awdal laga codsnayaa inay umada u tabiyaan hadba sida ay howluhu u socdaan.
Ilayaas Cali Bare
Reer Buuhoodle oo Go'aamo hor leh gaadhay iyo Todoba qodob oo ay kasoo saareen shir mudaba uga socday duleedka magaalada. Daawo dhacdo xiisa leh: Dagaal markii dambe loo kala baxay Dad iyo Dugaag oo ka dhex-dilaacay raxan Libaaxyo ah iyo Tabo-barahoodii
3 thoughts on “Beesha Mahamed Case oo u astaysay Maalinta Doorashooyinka S/land Maalintii xoraynta degmada Lughaya”
Hargeisawi 12/04/2012 at 9:24 am
Salaamu Aleykum walalayaal.
Niman yahow isdajiya. Wax cadaw la dhaha inagu ma dhax jiiro horta tas ogadaa.
Omar Gelleh wuxu wadwado wax soconaya maha wayo wu oog yahay horta cidu yahay Cise-wa walalaheen hadi nahayba Besha Dir weynta.
Ciise know they can’t start fire with Somaliland when the Afar are soon going to challenge them in Djibouti. All it will take is the French backing the Afar.
Saylac waxa leh wixi degan wana dhul Somaliland, sido kale Lughaya. Djibouti kuma riyoon kartoo.
Djibouti has no army and they are all old men. Inti yareedba waxay jogan Beledweyne.
Sanadkana waxay isku soo dhawaday Isaaq iyo Hawiye wayo colad ba ka tagan Jubbooyinka marka Hawiye needs Isaaq support.
Djibouti melna uma socoto hadi Isaaq iyo Hawiye ka so hor jestaan.
Anagu uma kala exanayno Cise iyo Samaroon lakin Djibouti must not interfere and that includes Isaaqis in Djibouti. Isaaqa Djibouti wa Djibouti, dhulka Cise ee Somaliland wa Somaliland, Samaroon wa Somaliland…
Dagal loma bahna.
libaxley 11/27/2012 at 12:48 pm
WARYAA HALA KACO WARYAA HALA TOOSO WALALAY GADABUURSI WAXAAN IDIIN SHEEGAYA IN GAROON QUCUNDHO AMA QODXO LEH UU KUBAD INA GULA CIYAARAYO ISAGOO KABO BIR AH XIDHAN NINKAN JABUUTI U TALIYA EE INA GEELE MARKAA WALALAYAAL WAXUU MAANTA SAYLAC KEENAY KUMANAAN BABUUR IYO DADBA AH OO AY WALIBA SAHAYDU U DHEERTHY MARKAA WAXA LAGU DAGAALAMAYAA DHAXALKII AWAWGAA KAA GA TAGAY EE INTAAD KA FAA IIDAYSOTO ILMAHAAGANA AAD UGA TAGI LAHAYD AYAA FAA IIDOBA HA JOOGTEE NIN INALA MIDI UU DOONAYA INUU CIISE MEESHA KU ABUURO WAAR WAXAAN LEEYAHAY KANA MAKAAHILA IYO KANA HABAR CAFAANA IYO KSANA MAXAMED CASE AH ISKA ILOOBA WAXAAD OGAATA KII XUNI WAA TOLKAA KII FIICANA WAA TOLKAA MARKAA WAXAAN IDIN LEEYAHAY AYNU IS MAQALO OO AYNU INDHO BILAA NAXARIISA SHISHEEYAHA AAN KU EEGNO WAXA IGA DARDAARANA WANAAGA INAGU AAN ISKA WAYNAY INAYNAAN MEEL KALE KA HELI DOONIN EE HALA OGAADO WA BILAHII TOWFIIQ ALLAH U AKKBAR
Anonymous 11/26/2012 at 12:58 pm
aniga oo ku hadlaya magacayga cabdi cige cali oo ah nin reer lughayaad ah waxa aan halan boogadin uga dirayaa ciqhaasha degmadayda lughayaad ka waxaan lee yahay dhamaan reer samaroon oo dhan in la difaaco dhulkeena cadawgu uu ku soo duulay ee la maagan yahay in la dhaco waxaan lee yahay saylici waa nacas waayo waxa uu wax u qaban waayay saylac oo uu ku badalay gudoomiyihii ciise nini kale oo ciise ah u dhiibay waxan leeyahay maxa case ha noolado cadawgiina ha jabo allow amiin amin amin